The Addams Family (1991) – Gold Channel Movies
ထူးခြားမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ သင်္ချိုင်းမြေပေါ်က အဒမ်စ်မိသားစုရဲ့ဇာတ်လမ်းလေပေါ့ ။
၂၀၁၉ မှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ အဒမ်စ်ကားတွန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဂိုးမေ့ဇ်မှာ တက်ရှ်ဆိုတဲ့ဇနီးရယ် ၊ ဝန္ဒစတေးဆိုတဲ့သမီး ၁ ယောက်ရယ် နဲ့ ပက်စလေဆိုတဲ့သား ၁ ယောက်ရှိတယ်။ ဂိုးမေ့ဇ် နဲ့ ဖက်စတာ ဆိုတဲ့ညီအစ်ကို ၂ ယောက်ဟာ ရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အစ်ကိုဖြစ်သူ ဖက်စတာဟာ‌ ၂၅ နှစ်လုံးလုံး ပျောက်သွားခဲ့တယ်။
အဲ့ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အပိုင်စီးမဲ့ ဒေါက်တာ ပင်ဒတ်ခ်ျ လော့စ် နဲ့ အဲလ်ဖော့ဒ် တာလီတို့ဟာ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဂိုးမေ့ဇ်ဆီ ဖက်စတာအတုအယောင်ကို ခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့ ။ အစအလယ်အဆုံး အကုန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးမို့ …. မပြောပြတော့ဘူးနော် …. ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင် ။
Run Time – 1 Hr 39 mins
IMDb Rating 6.9 135,887 votes
TMDb Rating73,018 votes
Hnin NyeintMarch 13, 2021Reply
Plz admin Addams family Link ပျက်နေလို့ အရမ်းကြည့်ချင်နေလို့ plz
Yan Naing WinDecember 19, 2020Reply
Please admin addam family linkတွေ ပျက်နေလို့ပါ